Iza moa izahay? > Mino ny WKG > Ny fiangonana
Ny Fiangonana, tenan’i Kristy, dia fikambanan’izay rehetra mino an’i Jesoa Kristy sy itoeran’ny Fanahy Masina. Ny fiangonana dia nirahina hitory ny filazantsara, hampianatra izay rehetra nandidian’i Kristy hatao batisa, ary hiandry ny ondry. Amin’ny fanatanterahana izany iraka izany, ny Fiangonana tarihin’ny Fanahy Masina dia mandray ny Baiboly ho tari-dalana ary mitodika hatrany amin’i Jesoa Kristy, lohany velona. Hoy ny Baiboly: Izay mino an’i Kristy dia lasa anisan’ny “fiangonana” na “fiangonana”. Inona moa izany, ny “Fiangonana”, ny “Fiangonana”? Ahoana ny fandaminana azy? Inona no hevitra? (1. Korintiana 12,13; Romana 8,9; Matio 28,19-20; Kolosiana 1,18; Efesianina 1,22)
Hoy Jesosy: Te-hanorina ny fiangonako aho (Matio 16,18). Zava-dehibe aminy ny Fiangonana - tena tiany izy ka nanolotra ny ainy ho azy (Efes 5,25). Raha manana saina toa azy isika dia ho tia sy hanolotra ny tenantsika ho an’ny Fiangonana koa.
Ny teny grika nadika hoe “fiangonana” [fiangonana] dia ekklesia, izay midika hoe fivoriambe. Ao amin’ny Asan’ny Apostoly 19,39-40 ny teny dia ampiasaina amin'ny hevitry ny fivorian'ny olona mahazatra. Ho an’ny kristiana anefa dia manana dikany manokana ny ekklesia: izay rehetra mino an’i Jesosy Kristy.
Tamin’ny fotoana nampiasainy voalohany an’io teny io, dia nanoratra toy izao i Lioka, ohatra: “Ary raiki-tahotra indrindra ny olona rehetra ...” (Asan’ny Apostoly). 5,11). Tsy voatery hanazava ny dikan’ilay teny izy; efa fantatry ny mpamaky azy. Niresaka momba ny Kristianina rehetra izy io, fa tsy ireo nivory teo amin’io toerana io ihany tamin’izany fotoana izany. Ny “congregation” dia manondro ny fiangonana, manondro ny mpianatr’i Kristy rehetra. Fiaraha-monina misy olona fa tsy trano.
Ny vondrona mpino tsirairay eo an-toerana dia fiangonana iray. Nanoratra “ho an’ny fiangonan’Andriamanitra any Korinto” i Paoly.1. Korintiana 1,2); miresaka momba ny “fiangonan’i Kristy rehetra” izy (Romana 16,16) sy ny “Fiangonan’i Laodikia” (Kolosiana 4,16). Ampiasainy koa anefa ny teny hoe fiangonana ho anaram-pikambanana iantsoana ny mpino rehetra rehefa milaza izy fa “tia ny fiangonana i Kristy ka nanolotra ny tenany hamonjy azy” (Efesiana). 5,25).
Ireo fiangonana eo an-toerana indraindray dia tsy mpino - ireo olona ao amin'ny fianakaviana izay tsy milaza an'i Jesosy ho Mpamonjy nefa mbola mandray anjara amin'ny fiainam-piangonana. Mety ho tafiditra ao anatin'izany ireo olona mieritreritra fa Kristiana izy ireo fa misy mamitaka ny tenany. Ny zava-niainana dia mampiseho fa ny sasany amin'izy ireo dia miaiky fa tsy tena Kristianina.
Maro ny olona milaza ny tenany ho mpino an’i Kristy, nefa tsy te hiditra amin’ny fiangonana. Izany koa dia tsy maintsy atao hoe fihetsika ratsy. Asehon’ny Testamenta Vaovao: Ny toe-javatra mahazatra dia ny fihaonan’ny mpino tsy tapaka (Hebreo 10,25).
Imbetsaka i Paoly dia miantso ny kristiana mba hifampiantra sy hiara-miasa, hifampanompo, ho firaisana (Romana 1.2,10; 15,7; 1. Korintiana 12,25; Galatianina 5,13; Efesianina 4,32; Filipianina 2,3; Kolosiana 3,13; 2. Thessalonians 5,13). Sarotra amin’ny olona ny mankatò ireo didy ireo rehefa tsy mihaona amin’ny mpino hafa.
Ny fiangonana eo an-toerana iray dia afaka manome antsika fahatsapana ho fananana, fahatsapana fa mifandray amin'ny mpino hafa. Afaka manome antsika fiarovana kely indrindra ho an'ny fiarovana ara-panahy izany mba tsy hanakorontana amin'ny hevitra hafahafa. Ny fiangonana iray dia afaka manome antsika namana, fiaraha-monina ary famporisihana. Izy io dia afaka mampianatra antsika zavatra tsy hianarantsika samirery. Manampy amin'ny fanabeazana ny zanatsika izy io, afaka manampy antsika hanompo an'i kristiana amin'ny fomba mahomby kokoa, afaka manome fotoana ahafahana manompo any amin'ny toerana hitomboan'izy io isika, matetika amin'ny fomba tsy misy fotony. Amin'ny ankapobeny dia azo lazaina hoe: Ny tombom-barotra omen'ny vondron'olona iray dia mifanaraka amin'ny fanoloran-tena izay ataontsika.
Fa angamba ny antony lehibe indrindra hidiran’ny mpino tsirairay ao amin’ny kongregasiona dia: Mila antsika ny fiangonana. Andriamanitra dia nanome fanomezam-pahasoavana samihafa ho an'ny mpino tsirairay ary tiany isika hiara-hiasa "ho tombontsoan'ny rehetra" (1. Korintiana 12,4-7). Raha ny mpiasa sasany ihany no tonga miasa dia tsy mahagaga raha tsy mahavita araka izay nantenaina ny fiangonana na tsy salama araka ny nantenaina. Indrisy anefa fa mora kokoa ny mitsikera noho ny manampy ny sasany.
Mila ny fotoanantsika, ny fahaizantsika, ny fanomezam-pahasoavana ananantsika ny fiangonana. Mila olona azony ianteherana izy - mila ny fanoloran-tenantsika izy. Niantso mpiasa hivavaka i Jesoa (Mat 9,38). Tiany isika tsirairay avy mba hifanome tanana fa tsy ho mpijery fotsiny.
Na iza na iza te-ho Kristiana tsy misy fiangonana dia tsy mampiasa ny heriny araka ny tokony hampiasantsika azy araka ny Baiboly, dia ny fanampiana. Ny fiangonana dia «fiarahamonina ifanampiana» ary tokony hifanampy isika, satria fantatsika fa ho avy ny andro (eny efa tonga io), fa mila fanampiana isika.
Ny filazalazana ny fokonolona
Ny fanoharana maro momba an’i Jesosy momba ny fanjakan’Andriamanitra koa dia mamaritra ny fiangonana. Tahaka ny voan-tsinapy, ny Fiangonana dia nanomboka kely ary nitombo (Matio 13,31-32). Ny fiangonana dia toy ny saha misy tsimparifary sy vary koa (and 24-30). Toy ny harato mahazo trondro tsara sy ratsy izany (and. 47-50). Toy ny tanimboaloboka izy io, izay misy ny sasany miasa mandritra ny ora maro ary ny sasany mandritra ny fotoana fohy ( Matio 20,1:16-2 ). Toy ny mpanompo nomen’ny tompony vola izy ka nampiasainy tamin’ny tsara na tamin’ny ratsy (Matio .5,14- iray).
Niantso ny tenany ho mpiandry ondry i Jesosy ary ondry ny mpianany (Matio 26,31); hitady ondry very no asany (Matio 18,11-14). Nolazainy fa ondry tokony hokarakaraina sy hokarakaraina ny mpino azy1,15-17). Nampiasa an’io tandindona io koa i Paoly sy i Petera ary nilaza fa tsy maintsy “miandry ny ondry” ny mpitondra fiangonana ( Asan’ny Apostoly 20,28 ; 1. Petrus 5,2).
“Ianareo no tranoben’Andriamanitra”, hoy ny nosoratan’i Paoly tao 1. Korintiana 3,9. I Kristy no fototra (and 11), izay iorenan’ny rafitry ny olombelona. Antsoin’i Petera hoe “vato velona, ​​natao trano fanahy” isika (1. Petrus 2,5). Miara-maorina isika “ho amin’ny fonenan’Andriamanitra amin’ny Fanahy” (Efesiana 2,22). Isika no tempolin’Andriamanitra, tempolin’ny Fanahy Masina (1. Korintiana 3,17; 6,19). Marina fa azo ivavahana amin’ny toerana rehetra Andriamanitra; fa ny fanompoam-pivavahana no anisan’ny zava-kendreny lehibe indrindra.
“Olon’Andriamanitra” isika 1. Petrus 2,10. Isika no tokony ho nananan’ny vahoakan’Israely: “taranaka voafidy, fanjaka-mpisorona, olona masina, olona manan-karena” (and. 9; jereo ny andininy faha). 2. Mosesy 19,6). An’Andriamanitra isika satria novidin’i Kristy tamin’ny rany isika (Apokalypsy 5,9). Zanak’Andriamanitra isika, Izy no Raintsika (Efes 3,15). Nanana lova lehibe isika fony zaza ary ho setrin'izany dia antenaina ny hampifaly azy sy hiaina mifanaraka amin'ny anarany.
«Aoka isika hifaly sy ho ravoravo ary hanome voninahitra Azy; fa tonga ny fampakaram-badin’ny Zanak’ondry, ary ny ampakariny dia efa voaomana” (Apokalypsy 19,7). Ahoana no "manomana" ny tenantsika? Amin'ny fanomezana:
« Ary navela hiakanjo rongony fotsy madinika tsara tarehy izy » (and 8). Manadio antsika “amin’ny alalan’ny rano fandroana amin’ny Teny” i Kristy (Efesiana 5,26). Apetrany eo anoloany ny Fiangonana rehefa avy nataony be voninahitra sy tsy misy kilema, masina ary tsy misy tsiny (and. 27). Miasa ao amintsika Izy.
Ny mari-pamantarana izay maneho tsara ny fomba tokony hitondran'ny mpiangona amin'ny hafa dia ny an'ny vatana. “Fa hianareo no tenan’i Kristy”, hoy ny nosoratan’i Paoly, “ary samy rantsambatana avokoa hianareo rehetra.” (1. Korintiana 12,27). I Jesosy Kristy no “lohan’ny tena, dia ny fiangonana” (Kolosiana 1,18), ary momba ny tena avokoa isika rehetra. Rehefa tafaray amin’i Kristy isika dia tafaray ihany koa ary – amin’ny tena heviny marina, dia mifanolo-tena.
Tsy misy afaka miteny hoe: "Tsy mila anao aho" (1. Korintiana 12,21), tsy misy afaka milaza fa tsy misy ifandraisany amin’ny fiangonana (and. 18). Andriamanitra dia mizara ny fanomezam-pahasoavana ananantsika mba hiarahantsika miasa ho tombontsoan’ny tsirairay sy mba hahafahantsika manampy sy mahazo fanampiana amin’ny fiaraha-miasa. Tokony “tsy hisy fisarahana” ao amin’ny vatana (and. 25). Matetika i Paoly no miady hevitra amin'ny toe-tsain'ny antoko; izay mamafy ady dia horoahina hiala amin’ny fiangonana (Romana 16,17; TITOSY 3,10-11). Andriamanitra dia mamela ny fiangonana “hitombo amin’ny faritra rehetra” amin’ny “ny rantsam-batana rehetra mifanohana araka ny ohatry ny heriny” (Efesiana). 4,16).
Indrisy anefa fa mizarazara ho antokom-pinoana ny tontolo kristiana, izay tsy mifanditra matetika. Tsy mbola tonga lafatra ny fiangonana satria tsy misy tonga lafatra ny mpikambana ao aminy. Na izany aza: Irin’i Kristy ny fiangonana tafaray (Jaona 17,21). Tsy voatery hidika ho fampivondronana fandaminana izany fa mitaky tanjona iraisana.
Ny tena firaisana marina dia tsy hita raha tsy miezaka hanakaiky an'i Kristy, mitory ny Filazantsaran'i Kristy, miaina araka ny fitsipiny. Ny tanjona dia ny hanaparitaka izany fa tsy ny tenantsika.Ny fananana fandavana samihafa dia misy tombony ihany koa: Amin'ny alàlan'ny fomba samihafa, ny hafatr'i Kristy dia mahatratra olona maro kokoa amin'ny fomba takatry ny sainy.
Misy endrika telo fototra amin'ny fikambanan'ny fiangonana sy fitarihana ao amin'ny tontolo Kristiana: hierarchical, demokratika ary solontena. Antsoina hoe episcopal, congovernmental ary presbyterial izy ireo.
Ny karazana fototra tsirairay dia manana ny karazany maro samihafa, saingy amin'ny ankapobeny, ny modely episkopaly dia midika fa ny mpiandry ambony dia manana hery hamaritana ny fitsipiky ny fiangonana ary hanendry mpitandrina. Ao amin'ny maodelim-pivoriana, ny vondron'olona ihany no mamaritra ireo zavatra roa ireo.Amin'ny rafitra presbyterial, mizara eo amin'ny anaram-piangonana sy ny fiaraha-monina ny fahefana; Ny loholona dia voafidy izay nomena andraikitra.
Fiaraha-monina manokana na Ny rafitry ny fiangonana dia tsy mandidy ny Testamenta Vaovao. Miresaka momba ny mpiandraikitra (eveka), loholona ary mpiandry ondry (mpitandrina) izy io, na dia toa azo ovana aza ireo anaram-boninahitra ofisialy ireo. Nandidy ny anti-panahy i Petera mba hanao toy izao amin’ny maha-mpiandry ondry sy mpiandraikitra azy: “Andraso ny ondry ...1. Petrus 5,1-2). Mitovy amin’izany ny toromarika nomen’i Paoly an’ireo loholona ( Asan’ny Apostoly 20,17:28, ).
Ny fiangonana tao Jerosalema dia notarihin’ny antokon’olona loholona; ny paroasin’ny Eveka tany Filipy (Asa 15,2- faha-6; Filipianina 1,1). Nandidy an’i Titosy hanendry loholona i Paoly, nanoratra andininy iray momba ny loholona ary maromaro momba ny eveka, toy ny hoe teny mitovy amin’ny an’ireo mpitarika ny fiaraha-monina ireo (Titus). 1,5-9). Ao amin’ny Taratasy ho an’ny Hebreo (13,7, Quantity and Elberfeld Bible) ireo mpitarika ny vondrom-piarahamonina dia antsoina hoe "mpitarika".
Misy mpitondra fiangonana antsoina koa hoe “mpampianatra” (1. Korintiana 12,29; Malagasy 3,1). Ny fitsipi-pitenenana ao amin’ny Efesianina 4,11 dia manondro fa anisan’ny sokajy iray ihany ny “mpiandry” sy ny “mpampianatra”. Ny iray amin’ireo fepetra lehibe ananan’ny mpanompo ao amin’ny fiangonana dia tsy maintsy “... mahay mampianatra ny hafa” (1. Timoty 3,2).
Amin'ny maha-denominista azy dia azo lazaina hoe: notendrena ireo mpitarika ny fiangonana. Betsaka ny fikambanan'ny vondrom-piarahamonina, na dia ny lanjan'ny anarana ofisialy aza dia manan-danja tokoa.
Ny mpikambana dia tsy maintsy naneho fanajana sy fankatoavana ny manampahefana (2. Thessalonians 5,12; 1. Timoty 5,17; Hebreo 13,17). Raha diso manapaka ny loholona, ​​dia tsy tokony hankatò ny fiangonana; fa mazàna no nampoizina fa hanohana ny loholona ny fiangonana.
Inona no ataon’ny anti-panahy? Ianao no miandraikitra ny fiaraha-monina (1. Timoty 5,17). Miandry ny ondry izy ireo, mitondra amin’ny ohatra sy ny fampianarana. Miandry ny ondry izy ireo ( Asan’ny Apostoly 20,28 ). Tsy tokony hitondra didy jadona izy ireo, fa hanompo (1. Petrus 5,23), «Mba ho voaomana ho amin’ny asa fanompoana ny olona masina. Izany no hanorenana ny tenan’i Kristy » (Efes 4,12).
Ahoana no tapa-kevitra ny anti-panahy? Amin’ny toe-javatra vitsivitsy dia mahazo fanazavana isika: Nanendry loholona i Paoly (Asan’ny Apostoly 14,23), mihevitra fa manendry eveka i Timoty (1. Timoty 3,1-7), ary nanome fahefana an’i Titosy hanendry loholona izy (Titosy 1,5). Na izany na tsy izany dia nisy ambaratongam-pahefana tamin'ireo tranga ireo. Tsy mahita ohatra momba ny fomba nifidianan’ny kongregasiona ny loholona ao aminy isika.
Hitantsika ao amin’ny Asan’ny Apostoly anefa izany 6,1-6, ny fomba nifidianan’ny kongregasiona ireo antsoina hoe mpiahy mahantra [diakona]. Nofidina hizara sakafo ho an’ireo sahirana ireo lehilahy ireo, ary napetraky ny apostoly tao amin’ireo birao ireo avy eo. Izany no nahafahan’ny apostoly nifantoka tamin’ny asa ara-panahy, ary natao koa ny asa ara-batana (and. 2). Ity fanavahana ny asa ara-panahy sy ara-batana ity dia hita ao amin'ny 1. Petrus 4,10-11.
Ny mpiasa an-tanana dia matetika antsoina hoe diakona, avy amin'ny teny grika hoe diakoneo hoe
"Manompo" dia midika hoe. Amin'ny ankapobeny, ny mpikambana sy ny mpitarika rehetra dia tokony "manompo", saingy nisy solontena misaraka ho an'ny asa amin'ny heviny tery kokoa. Ny diakona vavy dia voatonona ao amin’ny toerana iray farafahakeliny (Romana 16,1). Nomen’i Paoly anarana hoe toetra maromaro tsy maintsy ananan’ny diakona i Timoty (1. Timoty 3,8-12), nefa tsy voafaritra mazava tsara hoe inona ny fanompoana nataon’izy ireo. Vokatr'izany, ny antokom-pinoana samihafa dia manome asa samihafa ho an'ny diakona, manomboka amin'ny mpikarakara ny efitrano ka hatramin'ny fitantanam-bola.
Tsy ny anarana, na ny firafiny, na ny fomba famenoana azy no zava-dehibe ho an'ny toeran'ny fitantanana. Zava-dehibe ny hevitr’izy ireo sy ny tanjony: manampy ny olon’Andriamanitra amin’ny fahamatorany “hatramin’ny fahafenoan’i Kristy” (Efesiana). 4,13).
Ny tanjon'ny fokonolona
Kristy nanorina ny fiangonany, nanome fanomezana sy fitarihana ny olony izy ary nomeny asa isika. Inona ny tanjon'ny fiangonana?
Ny iray amin'ireo tanjona lehibe amin'ny fiaraha-monina ara-pivavahana dia ny fanompoam-pivavahana. Niantso antsika Andriamanitra “mba hitory ny fitahian’ilay niantso anareo hiala tamin’ny maizina ho amin’ny fahazavany mahagaga”1. Petrus 2,9). Andriamanitra mitady olona hivavaka aminy (Jao 4,23) izay tia Azy mihoatra noho ny zavatra rehetra (Mat 4,10). Na inona na inona ataontsika, na isam-batan’olona na fiaraha-monina, dia tokony ho voninahiny mandrakariva (1. Korintiana 10,31). Tokony “hidera an’Andriamanitra mandrakariva” isika (Hebreo 13,15).
Nodidiana isika hoe: “Mifampahery amin’ny salamo sy ny fihirana ary ny tonon-kiram-panahy.” ( Efesiana 5,19). Rehefa miangona isika dia mihira fiderana an’Andriamanitra, mivavaka aminy ary mihaino ny teniny. Endriky ny fanompoam-pivavahana ireo. Tahaka ny Fanasan’ny Tompo, toy ny batisa, toy ny fankatoavana.
Ny tanjon’ny fiangonana koa dia ny fampianarana. Izao no fototry ny didy: “...mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo” (Matio 2.8,20). Tokony hampianatra ny mpitarika ao amin’ny Fiangonana, ary ny mpikambana tsirairay dia tokony hampianatra ny hafa (Kolosiana 3,16). Mila mifananatra isika (1. Korintiana 14,31; 2. Thessalonians 5,11; Hebreo 10,25). Vondrona madinika no toerana tsara indrindra hanaovana izany fifanohanana sy fampianarana izany.
Nilaza i Paoly fa izay mitady ny fanomezam-pahasoavan’ny Fanahy dia tokony hikatsaka ny hampandroso ny fiangonana (1. Korintiana 14,12). Ny tanjona dia: mampahery, mananatra, mampahery, mampionona (and. 3). Izay rehetra mitranga eo anivon’ny fiangonana dia tokony hampandroso ny fiangonana (and. 26). Tokony ho mpianatra isika, olona mahafantatra sy mampihatra ny tenin’Andriamanitra. Noderaina ny Kristianina voalohany satria “naharitra” “tamin’ny fampianaran’ny apostoly sy ny fiaraha-monina sy ny famakiana ny mofo ary ny fivavahana” (Asan’ny Apostoly). 2,42).
Ny tanjona lehibe fahatelon'ny fiangonana dia ny fanompoana (sosialy). “Koa aoka isika hanao soa amin’ny olona rehetra, fa indrindra amin’izay mino”, hoy i Paoly (Galatiana). 6,10). Voalohany indrindra, ny fanoloran-tenantsika dia ny fianakaviantsika, avy eo amin'ny fiaraha-monina, ary avy eo amin'ny tontolo manodidina antsika. Ny didy faharoa ambony indrindra dia izao: Tiava ny namanao (Matio 22,39).
Manana filana ara-batana maro ity tontolo ity ka tsy tokony hatao tsinontsinona izany. Fa indrindra indrindra dia mila ny filazantsara izany, ary tsy tokony hataontsika tsinontsinona izany koa. Ao anatin’ny fanompoantsika izao tontolo izao, ny fiangonana dia tokony hitory ny vaovao tsaran’ny famonjena amin’ny alalan’i Jesosy Kristy. Tsy misy fikambanana hafa manao izany asa izany – asan’ny fiangonana izany. Ny mpiasa tsirairay dia ilaina amin'izany - ny sasany amin'ny "eo anoloana", ny hafa amin'ny asa fanohanana. Ny sasany dia mamboly, ny sasany zezika, ny sasany mijinja; Raha miara-miasa isika, dia hampitombo ny Fiangonana Kristy (Efesiana 4,16).